Mareykanka oo ka hadlay duqaynta Shabeelada Hoose – Radio Daljir
Mareykanka oo ka hadlay duqaynta Shabeelada Hoose
Maajo 12, 2018 6:26 b 0
Ciidamada Mareyanka Afrika ee (Africom) ayaa sheegay inay baarayaan wararka sheegaya in duqayn diyaaradeed oo kadhacday Shabeelada hoose Khamiistii lagu dilay 5qof oo dad rayid ah.
Warsaxaafadeed kasoo baxay Africom ayaa lagu sheegay inay ciidamadooda oo taageeraya kuwa Soomaaliya inay fuliyeen duqayn diyaaradeed oo kadhacday goob u dhow Bulcida, waxaana weerarkaasi lagu beegsaday dagaalamayaal katirsan Al-shabaab.
“Waxaynu la soconaaa warar inay sheegayaan in dad rayid ah ku waxyeeloobeen howlgal aan qaadnay todobaadkan, waxaana aynu qaadi doonaan tilaabo adag” ayaa lagu yiri qoraalka Africom, waxaana uu intaasi ku daray.
“Xog kasta oo aan helno oo kubsaabsan in dad rayid ah ay wax noqdeen, ciidamada Mareykanka ee Africom waxaa uu ku samaynayaa baaritaan iyo dib eegis warka gacanta sadexaad, haddii ay soo baxdo khasaare rayid ah oo kadhashay duqaynta waxaanu qaadi doonaa tallaabo ku haboon”
Maydadka shan ruux oo la sheegay inay beeralay ahaayeen ayaa todobaakan la geeyey Muqdisho, kuwaasi oo ku geeriyooday duqaynta Mareykanka uu ka fuliyay Shabeelada hoose.
Waa weerarkii labaad ee sanadkan ee Ciidamada Mareykanka duqayn uu Soomaaliya ka fuliyay la sheego inay waxyeelo kasoo gaartay dad rayid ah.
Maamulka Sh/ Dhexe: ” Waxba kama qaban karno fatahaadda Wabiga ee gobolka” (dhegayso)
Saldhiga Turkiga ee Muqdisho oo la duqeeyey